Bimetal ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး Bimetal ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. တွင်တည်ရှိသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံမှာအတူတစ်ဖက်ရှင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လက္တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Taiwan Bimetal ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်။ အဘယ်မြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းအမေရိက, ဥရောပ, အာဖရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, Southeastern အာရှကျွန်တော်တို့၏ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်။ ယခုတိုင်အောင်ငါတို့သည်သင်တို့မည်သည့်လိုအပ်ချက်ရှိပါကမှာကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ, ပိုကြီးတဲ့ကုန်စည်စုစုပေါင်း 100 ကျော်စတိုင်များရှိသည်။ သင်တို့နှင့်အတူအကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်။
ပုံစံ - FORGED STEEL No. SB81、SB81F
DSC သံမဏိ BIMETALLIC Steam ထောင်ချောက်များ
●MOP 40K 350 x ကို̊ဂ.
●ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်များအရထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်:ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလက်မှတ်,စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာ,မူလနှင့် WPS ၏လက်မှတ်/PQR.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/bimetal-steam-trap.html
အကောင်းဆုံး Bimetal ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Bimetal ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
DSC အားလုံးသံမဏိ BIMETALLIC Steam ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.SB73、SB73F ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 32K x ကို 320̊ဂ. ●ဟိုက်ဒရောလ်ရှော့ခ်များကိုအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●လေပူအပူချိန်တွင်လေနှင့် CO2 ကိုလေမထုတ်ပါနှင့်. ●နောက်ပြန်ဖိအားဆန့်ကျင်ကောငျးမှု. ●ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးစေနိုင်သည့်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသည် ●CONDENSATE ၏ပက်ကျိတုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေး. ●အသေးစားနှိုင်းယှဉ်ရူပဗေဒအရွယ်အစား.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.SB73